कतै तपाईलाई त भएको छैन किड्नी क्यान्सर! अवश्य जानी राख्नुहोस्, यी ५ तथ्य – Etajakhabar
कतै तपाईलाई त भएको छैन किड्नी क्यान्सर! अवश्य जानी राख्नुहोस्, यी ५ तथ्य
ताजा खबर:- किड्नी शरीरको निकै महत्वपूर्ण भाग मध्य एक हो, जसले शरीरको कार्यप्रणालीलाई सन्तुलित बनाई राख्न सहायक हुन्छ । किड्नीको समस्याहरू जीवन र स्वास्थ्य दुवैको लागि खतरनाक सावित हुन्छ । किड्नी क्यान्सर, किड्नीको गम्भीर समस्याहरूमा समावेश छ । किड्नी क्यान्सरको बारेमा जान्नैपर्ने ५ तथ्य यस्ता छन् ।
१-धुम्रपान एवम् जाँडरक्सीको अत्यधिक सेवनले किड्नी क्षतिग्रस्त हुनसक्छ र किड्नी क्यान्सरको खतरा कयौँ गुणा बढ्छ । यसको लागि धुम्रपानमा कमी ल्याउन आवश्यक हुन्छ ।
२-किड्नी फेल हुने या ठिक तरिकाले काम गर्न असक्षम हुने स्थितिमा डायलिसिस अति आवश्यक हुन्छ तर लामो समय सम्म डायलिसिस गराईसकेपछि किड्नी सिस्ट या किड्नी क्यान्सरको खतरा दुईगुणा बढ्छ । हुनत: यसको डायलिसिससँग कुनै सिधा सम्बन्ध छैन ।
३-अनुवांशिक कारणहरूले पनि किड्नी क्यान्सर हुनसक्छ । यस स्थितिमा प्रत्यक किड्नीमा ट्यूमर हुनसक्छ । अनुवांशिक किड्नी क्यान्सरको लक्षण कम उमेर देखि नै देखिन थाल्छ ।
४-यदि तपाई हाई ब्लड प्रेशरको समस्यामा हुनुहुन्छ भने किड्नीको समस्या हुने सम्भावना हुनसक्छ । वास्तवमा हाई ब्लड प्रेशरको कारण किड्नीको रक्त वाहिका साँगुरो वा मोटो हुन्छ, जसबाट शरीरलाई अनावश्यक तत्व बाहिर निकाल्न समस्या हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा क्यान्सर बन्ने सम्भावना अधिक हुन्छ ।
५-अध्ययनका पत्ता लागेको छ कि मोटो मानिसमा किड्नी क्यान्सर हुने सम्भावना पातलो मानिसको तुलनामा अधिक हुन्छ । मोटोपनको कारणले किड्नी क्यान्सरको खतरा लगभग ७० प्रतिशत बढ्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २२, २०७४ समय: १२:०४:५०